War hada ah:- Nin Somali ah oo Dhoor Qof ku dhaawacay Dalka Norway
HomeWararka Maanta SomaliskaWar hada ah:- Nin Somali ah oo Dhoor Qof ku dhaawacay Dalka Norway
6 months ago Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Nin Soomaali ah ayaa weerar toorey loo adeegsaday oo sababay khasaaro dhimasho iyo mid dhaawac isugu jira ka geestay magaalo 90-km u jirta magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway.
War kasoo baxay booliiska dalka Norwey ayaa lagu sheegay in ninkan Soomaaliga ah toorey ku weeraray sadex gabdhood oo kala ahaa gabar cadaan ah iyo labo gabdhood oo kale Soomaali ah xili ay bas raaci rabeen.
Booliiska ayaa sheegay in gabada cadaanka ah u dhimatay dhaawac halis ah oo kasoo gaaray weerarka halka labada gabdhood ee Soomaalida ah la dhigay isbitaal iyadoona mid kamid ah xaaladeeda la sheegay in ay liidato.
Ninka weerarka geestay oo warar soo baxaya sheegayaan in madaxa looga jiray ayaa waxaa xiray ciidamada booliiska Norey, mana jiro wali war rasmi ah oo booliiska kasoo saareen weerarkan khasaaraha geestay iyo sababta keentay.
Soomaalida kunool dalka Norwey ayaana dhacdadan si weyn u hadal haya, waxa ayna dadka qaar sheegayaan in weerarkaasi ninka geestay madaxa looga jiray sidaa u weeraray gabdha Soomaaliyeed iyo gabdha kale ee cadaanka ah ee la socotay.